Izincwadi Ezinhle Emlandweni WaseSpain
Umlando namasiko Umlando waseYurophu
Indlela yesimanje yaseSpain yenziwa ngokuphumelelayo ngo-1579 lapho imiqhele yaseAragon neCastile ibumbene ngomshado kaFerdinand no-Isabella. Kodwa umlando waseSpanish uhlanganisa nenkathi ekhulayo yamaSulumane kanye nombuso wezwe.
Incwadi kaPierson ibilokhu ihlonishwa njengomlando owodwa we-volume weSpain, ukukhetha kuqala kwabafundi nabafundi abajwayelekile ngokufanayo. Ngokuqinisekile kukhona okuningi 'okungeziwe', kufaka phakathi ama-mini-biographies, umugqa wesikhathi, nendaba yeBhayibheli! Okubaluleke nakakhulu, uPierson ubhale umbhalo omuhle kakhulu ohlinzeka ngokubuka okufudumele nokuthakazelisayo okuvuma ukufundiswa kwamanje.
Ukulandisa okumangalisayo kuhlanganisa iminyaka engaba ngu-250 yomlando ngendlela ecacile futhi ecacile. Isitayela sikaKamen sifanele bonke abafundi - nakuba lesi singeniso sihloselwe ikakhulukazi kubafundi noma abaqalayo kule ndaba - kanti izahluko ezicacile, ezisebenzisa ngokugcwele izingxenye ezithile, zifinyeleleka ngokuphelele. I-glossary, amabalazwe, umuthi womndeni kanye ne-bibliography yengezela umbhalo wekhwalithi.
Leli bhuku lisebenzisa isakhiwo sokulandelana ukuze kutholakale ukubuyekezwa ngokuhlelekile (nakuba abanye bangase bathi ngokuqondile) ukuhlolwa komlando waseSpanish. Izazi-mlando ezivela eSpain, eBrithani naseMelika ziye zafaka isandla, zanikeza imiqondo emihle kakhulu emhlabeni wonke okhuluma iSpanishi. Uma ufuna imibono emisha nezindlela ezintsha eSpain kanye nomlando omuhle, zama lokhu.
ISpain ihlelwe nguRaymond Carr
Lapha, umlando waseSpain uhlanganiswe ezincwadini eziyisishiyagalolunye nje, ngasinye esibhaliwe nguchwepheshe endaweni efanele futhi sihlanganisa izihloko ezifana namaVisigoths nezombangazwe zanamuhla, kanye nemisebenzi yezandla. Edunyiswa kakhulu futhi, ngokungavamile ngomlando, okufanekiselwa kancane, iSpain ibiza kakhulu kulabo abayilandelayo kodwa inhle kakhulu kunoma ubani onentshisekelo enkulu.
Umlando Wenhlalakahle WaseSpain Yamuva nge-Adrian Shubert
Nakuba le ncwadi yenza ngokuqondile njengoba isihloko sibonisa - ngumlando womphakathi waseSpain kusukela ngo-1800 - incazelo enjalo iyayilahla ubujamo obuningi bombhalo ovuma ngokugcwele ukuhlukahluka kwesifunda nezombangazwe. Ngakho-ke, le ncwadi yenza iphuzu eliphelele lokuqala kunoma ubani onentshisekelo kubantu, ngokumelene nohulumeni, waseSpain yanamuhla.
UMoorish waseSpain nguRichard Fletcher
Emakhulwini eminyaka yamaSpain abangamaKristu ahlasela inkumbulo yenkathi lapho uMbuso wamaSulumane ubusa iSpain, futhi ukwethembeka sisazizwa nemiphumela. Kodwa incwadi kaFletcher iyi-akhawunti elinganiselayo yenkathi ethakazelisayo esivele ibonakala ezingxabano zezombangazwe.
Umlando weSpain Medieval nguJoseph F. O'Callaghan
Lo msebenzi omdala yi-standard evolumu eyodwa ye-Spain esuka kumaVisigoths kuya kuFerdinand no-Isabella, futhi igcina umlando ogcwele. Kungaba lukhuni kodwa kuyindlela yokubuka okuhle ukuzakhela ngemisebenzi egxile kakhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi ucabangani ezindabeni zezombangazwe zokuzibusa kweBasque, akukho ukuphika ukuthi umlando oqoshiwe kaKurlansky wabantu baseBasque - umbhalo onobuciko futhi obunama-anecdotal ohlanganisa izithombe nezindlela zokupheka - kuyinto ejabulisayo nokukhanyisa izinto, futhi ukuhlanganyela okufudumele kugwema ukufutheka noma ukuziqhenya.
ISpain yamaKatolika amaKatolika 1474-1520 nguJohn Edwards
Isihloko asikwazi ukumelela okuqukethwe, kodwa le ncwadi inikeza isingeniso esibanzi esikhathini sikaFerdinand no-Isabella. U-Edwards uhlanganisa ububanzi bezindaba, kusukela ezombusazwe kuya ezinkolweni ngendlela yezempi namasiko. Ngenhlanhla kubafundi, le vidiyo ayiyona nje imfundo ephakeme kakhulu futhi enomncintiswano, kodwa futhi ifundela ngokujabulisayo.
I-Spanish Society, 1400-1600 nguTefifilo Ruiz
Ukumboza inkathi yangaphambilini kunokukhetha u-5, umbhalo kaRuiz uhlola izinguquko emphakathini waseSpanish phakathi nenkathi yesikhathi esidlule nesikhathi sokuqala esinomfudumalo nokuhleka. Umphumela uba i-akhawunti enemibalabala futhi ejabulisayo eshintsha phakathi kwengxoxo ebanzi kanye nokuphila komuntu ngabanye kusukela kulesonto eliphakeme kunazo zonke ukuya emabhokisini aphansi kakhulu.
I-Voyage of the Armada kaDavid Howarth
Kuyinto eyiqiniso yezemfundo yaseBrithani, kodwa izingane eziningi zesikole ziyazi ukuthi kukhona umlando owodwa kuphela womlando waseSpain: i-Armada. Yiqiniso, isihloko siqhubeka sithandeka futhi le ncwadi eshibhile-kodwa enhle kakhulu isebenzisa imithombo yaseSpain ukuveza isithombe esiphelele.
UFiliphu II nguPatrick Williams
Ngekhulu leminyaka leshumi nesithupha leminyaka, uFiliphu II wabusa, hhayi nje iYurophu kuphela, kodwa izingxenye ezinkulu zomhlaba, eshiya ifa eliyinkimbinkimbi okwenziwa yizazi-mlando. Lolu cwaningo lusetshenziswa ngokulandelana kwenkathi ukuhlola isimo esishintshayo sikaFiliphu nezenzo zakhe, abalandeli benkosi nabanqamuli kanye nethonya lakhe.
ISpain: Isikhungo Sezwe 1519-1682 nguRobert Goodwin
Njengoba ungaphetha ngesihloko, lokhu kubheka eSpain kugxile komunye wemibuso yokuqala yaseYurophu emhlabeni wonke, kodwa kusekhona okuningi enxenyeni yaseYurophu uma yilokho okufunayo. Leli bhuku elikhulu, elicebile nelinokuhlakanipha ongalisebenzisa.
Juan Carlos: Ukuqondisa iSpain kusuka ekubusweni kukaDemocratic Paint nguPaul Preston
Lapho izazi-mlando zekhulu lama-20 ziza ukuhlola uJan Juan Carlos, zizothola uPaul Preston ngaphambi kwazo. Kule biography, sibona indaba ephawulekayo yendoda eyayikwazi ukuqondisa i-Spain post-Franco iphinde iyifake njengenkululeko yeningi, ikakhulukazi mayelana nentsha yakhe ibonisa okuphambene nalokho. Okuningi "
Franco: A Biography nguPaul Preston
Incwadi enkulu edinga ukuzinikezela okuthile, le biography ye-dictator yekhulu lama-20 eSpain isifundo sokufunda ngenye yezazi ezihamba phambili. Kuningi lokucwaninga kwasekuqaleni kanye nezindaba eziphethe iSpanishi yanamuhla, zonke ziphathwa kahle. Umsebenzi omfushane ubheke uMichael Streeter 'Franco'. Okuningi "
Ukuqonda intela ye-Poll yeScotland neBrithani
Imicimbi eyinhloko emlandweni wase-Italy
Amabhuku Aphezulu: Imilando Ejwayelekile YaseYurophu
Inkinga yeSuez 1956: Imperial Folly yaseBrithani neFrance
Izindatshana Zase-European Historical Female: 1500 - 1945
Yayiyini 'Indawo Yesithathu'?
Babengobani AbaMensheviks NamaBolshevik?
I-Glossary of Historical Terms
Umhlahlandlela Wokuqala Okwenguquko YeProthestani
Ukuphikisana NgeMikhosi KaColumbus Day
Indlela Yokugcina I-Lab Notebook
Amageyimu we-Best Computer Baseball
Izinkulumo Ezinhle Kunazo Zonke U-Abraham Lincoln
Okufanele Ukwazi Ngezibonakaliso Ezibekiwe ku-Astrology
Ubani i-Ryder Cup okuthiwa emva?
I-Classic Car Ayikho i-Crank ayikho isiqalo
Imiyane - Umndeni Culicidae
Imikhiqizo kanye Nezimpahla Zokuthenga Izingxenye Zemoto Ezisetshenziswa
I-Verlan - I-French Slang
Izinhlobo ezahlukene zemali emnothweni
Isikhumbuzo Somkhosi Izinsuku Zomhlaba Wonke
Konke Mayelana Nomndeni wakwaSikh
Indlela Yokuguqula I-Invention Yakho Kuzuzisa
Amabhuku Okufundwa Ngaphambi Kokuya Esikoleni Esiqedile Esikoleni
Ulimi lwezinguquko - uPeter Piper
I-Washington ne-Lee GPA, i-SAT kanye ne-ACT Data
Izimfihlo zeCoral Castle
Amathiphu wokubuka izinyoni eziqalile
Ukubekezela kanye neziguli
I-Beach Buzz Ball - i-Perfect Summer Ice Breaker
I-Royal Assent Assent iyashintsha iMithetho Yomthetho eCanada
I-Fishune Teller Miracle Fish isebenza kanjani?
Ayengobani Abayisishiyagalolunye AmaGreki?
Iphi Midpoint of Lent?